Maxay tahay sababta aan u taageerayo murashaxa MP ee Yusuf Hassan
Maxay tahay sababta aan u taageerayo murashaxa MP ee Yusuf Hassan ee u taagan degaanka Kamakuja, Nairobi –Why I endorse him?
Waxaa Minnesota booqasho taageero raadin ah ku yimid Murashaxa Yusuf Hassan asagoo si toos ah Soomaalida ka soo jeeda degaankaas iyo kuwa kale ee danaynaya arrimaha soomaalida degaankaas iyo guud ahaanba arrimaha islaamka ee geeska Afrika uga codsaday inay taageeraan si kasta oo ay awoodaan ololaha doorashadiisa. Waxaa kale oo uu ka codsaday in lala xiriiro dadka codeyn kara ee degaanka Kamakuja oo ay Islii ka mid tahay.
Ka dib markii aan wax badan ka bartay murashaxa iyo hadafkiisa iyo dhibta ka jirta degaankaas waxaan halkan ku cadaynayaa in aan si buuxdo u taageerayo anigoo ugu yeeraya dadka jecel horumarka soomaalida iyo Islaamkaba inay taageeraan murashaxa Yusuf Hassan labo qodob awgeed:
1) Murashax Yusuf Hassan oo ah aqoon yahan dadaal badan, waayo aragnimo, iyo firfircooni ka muuqato ayaa la xaqiijiyey inuu u qalmo kursiga MP ee degaanka Kamakuja oo ay Islii ka mid tahay. Murashax Yusuf Hassan oo ah Soomaali si fiicanna ugu hadla afka Soomaaliga ayaa ayaa la xaqiijiyey inuu yahay qof aad u daneeya wanaagga Soomaalida iyo dhamaan muslimiinta gobolka.
2) Muhimaddda Nairobi ama baarlamaanka Kenya oo aan la iska indho tiri karin weliba Islii oo noqotay meesha ay Soomaalida dhigatay ukumaheedii iyo maalkeediiba. Dhibta ka muuqata degaanka Islii sida wado la’aanta, nadaafad la’aanta, shaqo la’aanta, nabad gelyo la’aanta iyo xuquuq la’aanta ka jirtaa oo ah mid wax ka qabad u baahan Yusufna xoogga saari doono haddii Ilaahay idmo
Waxaan ka codsanayaa in qofkasta oo taageeri karaa uu taageero Murashaxa Yusuf Hassan oo aan filaynayno inuu noqodo qofkii ugu horeeyey ee muslim ah isla markaana ah Soomaali ee laga soo doorto Nairobi Kenya.
Soomaali - Keep hope alive -
Former Minneapolis Mayoral Candidate &
Norm Coleman – MN
Macluumaad dheer oo muhiim u ah waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed ee ... Waxbarasho ka kooban wax aqris iyo sheekooyin badan iyo wax dhigid iyo computer ...